JetBrains Oo Bilaabay Meel bannaan, Madal Wadashaqeyn loogu talagalay Soo-saareyaasha iyo Naqshadayaasha | Laga soo bilaabo Linux
JetBrains wuxuu bilaabay Space, oo ah madal wadashaqeyn ah oo loogu talagalay horumarinta iyo naqshadeeyayaasha
Xulka wararka oo dhan | | Barnaamijka
JetBrains (shirkad soo saarta softiweer loogu talagay maareynta mashruuca iyo bey'ado horumarineed oo isku dhafan oo loogu talagalay luuqadaha barnaamijyada kala duwan) dhawaan ku dhawaaqay daahfurka dadweynaha ee Space, madal wada-jir ah oo loogu talagalay kooxaha hal-abuurka ah.
Space ujeedadiisuna tahay inay noqoto meel ay kooxaha ku socdaan kuwaas oo ay ka mid noqon karaan kuwa horumariya, suuq geynta, qaabeynta, ilaha shaqaalaha, kooxaha sharciga iyo kuwa kale kuwaas oo sameeya nooc kasta oo shaqo ah oo u baahan warbaahin fara badan iyo isgaarsiin fara badan, jadwalka kulanka iyo maaraynta mashruuca.
Hadafka Hawada waa isku dar dhammaan qalabka wada shaqeynta guudsida wada sheekaysiga, kooxda iyo maaraynta mashruuca, shirarka iyo jadwalka, iyo dukumiintiyada, dhammaantoodna ku wada yaal meel keliya. Natiijo ahaan, dhammaan barnaamijka ama wareegga horumarinta hal-abuurka waxaa lagu matalayaa hal codsi loomana baahna "in la beddelo macnaha guud" (ama loo kala beddelo codsiyada marka la lumiyo booskaaga).
"Marka la joogo Space, looma baahna in qalab lagu beddelo maaddaama wax walba ay yihiin hal meel, taas oo naga caawinaysa inaan si fudud u helno aragti guud oo shirkadda oo dhan ah," ayuu yiri Andras Kindler, oo ah aasaasaha shirkadda Makery, oo ah adeeg bixiye. iyo alaabada dhijitaalka ah. Waxaan isticmaalnaa liisaska hubinta, dhibaatooyinka, dib u eegista koodhka ee la dhisay, qoraalada maqaalka, iyo waxyaabo kale oo badan. Boosku wuxuu noo ogolaanayaa inaan socodsiino dhamaan howlaha dhamaanteed wadada «.
Sidan oo kale, Meel bannaan ayaa ka caawisa abuurista dareen dhammaystiran qof kasta oo ka tirsan kooxda, ogolaanshaha dalabka in loo beddelo si uu ugu habboonado doorka qofka isticmaalaya.
"Kahor Space, horumariyeyaasheena waxay inta badan dareemeen inay ka go'antahay kooxda inteeda kale oo aysan kaalin qoto dheer ka ciyaarin mashaariicda," ayay tiri Anna Vinogradova, oo ah sarkaalka sarkaalka suuq geynta ee AmberCore Software Ltd., oo ah shirkad ku takhasustay horumarinta wax soo saarka tikniyoolajiyadda. . Waxaan raadineynay qalab isku xira wax walba hal koox isla markaana u sahla xubnaha kooxda in ay ka wada hadlaan shaqooyinkooda midba midka kale halkii ay gooni ugu fadhiisan lahaayeen keydkooda.
Mustaqbalka, Space wuxuu ku dari doonaa astaamo u oggolaanaya inuu la jaanqaado Kalandarka Google iyo Muuqaalka, iyo sidoo kale inuu dhexgalo aaladaha kale ee caanka ah.
Codsiga Waxay sidoo kale leedahay interface interface barnaamijyada barnaamijyada, webhooks, xirmada horumarinta softiweerka Space Client, meelaha gaarka loo leeyahay iyo otomaatiyada. Waxay dhawaan soo bandhigi doontaa codsiyada gaarka loo leeyahay iyo suuqyada, oo ay weheliso astaamaha kale ee dadweynaha wajahaya.
Madaxa JetBrains Maxim Shafirov ayaa yidhi "JetBrains waxaay kubilaabtay sidii shirkad horumarineed, laakiin hada 40% kooxdeena waxay ciyaaraan dooraryo kaladuwan oo hal abuur leh: naqshadeeyayaasha, suuqleyda, qorayaasha wax qora iyo kuwa kale." "Waxaan u abuurnay Space si aan usii wadno wada shaqeynta koox ahaaneed waxaanan aaminsanahay in shirkadaha kale ay iyaguna ka faa'iideysan doonaan."
Waxyaabaha ka muuqda Space, waxaan ka heli karnaa waxyaabaha soo socda:
HTTP API: webhooks iyo macmiilka SDK ee la qabsashada aaladaha dibedda.
PShakhsiyeynta la beddeli karo iyo otomatigga: in-soo-saarka leh beeraha caadiga ah iyo qulqulka shaqada ee Kotlin si ay ugu habboonaato qaab-dhismeedka iyo habraacyada ururrada gaarka ah.
Noocyada isdhexgalka iyo amarrada: Codsiyada ayaa diiwaangelin kara bots u shaqeyn doona sidii dhiggooda wada sheekaysiga oo lala falgeli karo. Hab kale oo loola xiriiro barnaamijyada waa amarro.
Meel u ah adeege oggolaansho: OAuth2, borotokoolka oggolaanshaha heerka warshadaha, ayaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo marin u helidda bannaan ee codsiyada dibadda, isku-darka iyo adeegyada.
Macmiilka Booska SDK: Macmiil Goob Joog ah SDK oo loogu talagalay Kotlin iyo .NET ayaa la siiyaa si ay awood ugu siiso xitaa isdhexgalka dhow ee Space heerka koodhka ilaha.
Codsiyada: Habka koowaad ee lagu ballaadhiyo Booska. Samee barnaamijyo la shaqeeya qaybaha kala duwan ee Hawada isla markaana sameeya ficilo kala duwan.
Boosku wuxuu ku bilaabmayaa tier bilaash ah oo shirkadaha si ay u tijaabiyaan softiweerka iyo xulashooyinka rukunka ee ka bilaabmaya $ 8 halkii isticmaale ee firfircoon bishiiba wadashaqeyn ballaaran. Barxadda waxaa lagu heli karaa daruurta sidoo kale waxay yeelan doontaa nooc maxalli ah mustaqbalka dhow.
Ugu dambeyntii, haddii aad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato, waad awoodi kartaa hubi xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Barnaamijka » JetBrains wuxuu bilaabay Space, oo ah madal wadashaqeyn ah oo loogu talagalay horumarinta iyo naqshadeeyayaasha
Jitsi Desktop: Wicitaan Furan Fiidiyow iyo Codsi Wadahadal
Ururka Miisaanka ayaa bedelay magaciis wuxuuna noqday Ururka Diem